Soo degso DeHavilland DHC8-Q XXXX Xidhmada loogu talagalay FSX - Rikoooo
downloads 22 041
The 8 Dash Bombardier ama Taxanaha Q, oo horey loo yaqaaney sida Havilland de Kanada cagtaadu 8 ama DHC-8, waa taxane ah oo mataano-engined, kala duwan oo dhexdhexaad ah, dayuuradood turboprop. Soo bandhigay by de Havilland Kanada (DHC) ee 1984, waxay hadda waxa soo saarey Bombardier Aerospace. In ka badan 1,000 8s Dash ee lagu daydo oo dhan ayaa lagu dhisay la Bombardier hillaadiyo total orod-soo-saarka ah ee unugyada 1,192 dhammaan kala duwanaanshaha ilaa 2016.
Taxanaha 100 waxaa uu leeyahay awood badnaan 39, 200 Taxanaha leeyahay awood la mid ah, laakiin waxay bixisaa matoorada awood badan.
Production of Q200 iyo Q300 taxanaha joogsadeen 1998 oo kaliya Q400 ee hadda la soo saaray, laakiin boqolaal versions -100 iyo -200 sii adeegga adduunka oo dhan.
All 8s Dash ka quarter labaad ee 1996 samatabbixiyey ka mid ah Qayladii Active iyo nidaamka Xakamaynta gariirka (ANVS) loogu talagalay si loo yareeyo buuqa qol iyo heerka gariirka in ku dhawaad ​​kuwa dayuuradood jet. Si xoogga saaraan ay xasilloonaan, Bombardier baxshay ku daydo 8 Dash sida turboprops Taxanaha Q (Q200, Q300 iyo Q400).
xirmo Buuxi la dhawaaqa, VC en model la rinjiyeeyeen Continental, aad u wacan inuu u duulo